Ahoana ny fomba hahazoana mari-pahaizana RHCE?
Fomba handraisana RHCE Certified
RHCE Mpihaino: Rahoviana Ianao no Tokony Hahazoanao Izany?
Inona no mety ho azonao atao rehefa vita RHCE?
Ny mari-pankasitrahana RHCE (Red Hat Certified Engineer) dia iray amin'ireo fanamarinana rafitra sy fangatahana fananganana rafitra manerantany. Ny RHCE dia tena manan-kery ho an'ny Administratoran'ny Red Hat Certified System (RHCSA) izay manana fahaizana sy fahaizana fanampiny izay takiana amin'ny fananganana manam-pahefana ambony. Ny manam-pahaizana RHCE voamarina dia miandraikitra ny manara-maso sy manerantany ireo orinasa Red Hat Enterprise Linux izay fototry ny rafitra Linux dispersion noforonin'i Red Hat. Ity rafitra ity dia loharano maimaim-poana sy malalaka izao. Izany no tsy mahagaga fa ny fahazoana mari-pankasitrahana RHCE dia heverina ho toy ny teboka notontosain'ny manam-pahaizana IT. Ny fomba fiasa dia manome antoka sy hanatanterahana betsaka. Na dia eo aza ny zava-misy, raha te hahazo antoka RHCE dia midika fa ny RHCSA no antoka voalohany. Ahoana ny fomba hahatongavana ho marika ho an'ny RHCE?
Alohan'ny handraisana ny mari-pankasitrahana RHCE, dia tokony hohamafisina ny RHCSA. Ny fepetra fampiofanana dia azo atolotra amin'ny toetry ny fotoana misy anao. Ireo Windows adiresy izay manana traikefa Linux dia tokony handeha ho an'ny Red Hat System Administration I sy II (RH124 sy RH134) ary ny Kianjan'ny Red Hat System Administration III (RH254) mba hiomanana amin'ny fanadinana. Raha toa ka tsy dia manahirana be loatra ny manadino ny sasantsasany manaraka:
Mpandraharaha Windows rafitra manana Linux be izao:
Linux na mpiandraikitra UNIX izay manodidina ny 1 hatramin'ny taona 3 niaina:
Azonao atao ny mipetraka amin'ny fomba fampiofanana izay mahaliana anao - kilasy, ao amin'ny tranokala, na amin'ny tranonkalanao. Misy fototra maro manome ny fianarana RHCSA sy ny ambaratonga hafa manaraka.
Ireo RHCSA dia nanamafy ireo manam-pahaizana izay mety te-hahatratra ny fahaiza-manaon'ny zokiolona mitadidy ny tanjona farany hikorontana ny fiantsoana azy ireo dia tsy maintsy mandalo fanamarinana RHCE. Azonao atao koa ny mahazo ny RHCE azo antoka amin'ny toe-javatra fa mpanatanteraka rafitra zokiny farany ianao saingy mbola tsy voamarina. Ankoatra izany, amin'ny fotoana tsy nahavitanao ny fanatontosana ny RHCE Rapid Track Course na ireo olona izay nahavita ny fitantanana System I, II, ary III.
Mba hamitana ny mari-panazarana RHCE, dia tsy maintsy mandalo ny fanadinan'ny 3.5 ora RHCE (EX300) ny Linux 7. Amin'ny fotoana tsy ahafahana manamarina ny famerenana ny RHCE iray na tsia amin'ny fotoana tsy ahafahan'ny olona te handray anjara amin'ny fanadihadiana iray miorina amin'ny laboura alohan'ny handraisana ny fanadinana RHCE, tokony handeha ho an'ny laboratoire Certification RHCE (RH299). Ity no rafitra efa nomanina androany izay notarihan'ny mpampianatra iray izay ahafahanao mandroso hiasa amin'ny alàlan'ny labs rehetra avy amin'ny lalaon'ny Red Hat System Administration II, II sy III, miaraka amin'ny taranja Rapid Track.
Araka izay ambaran'i Red Hat, ny lohahevitra iray manan-danja dia ny mety handraisan'ny RHCE izay azon'I RHCSA azo antoka. Na dia eo aza izany, dia hanana fahafahana hametraka mari-pamatiham-potoana izy ireo; mandamina ny dian-tongotra, mamaritra ny fisarahana, ary mandamina ny fandikana adiresy; Ny famoronana sy fampitana dia manome ny kaonty momba ny fampiasana ny rafitra; fananganana rafitra fikirakirana, anisan'izany ny fametrahana alalana; mametraka (initiator) iray (iSCSI); ampiasao andian-tsoratra shell mba handamina ny rafitra mpanohana ny rafitra ary hamolavola rafitra hanome governemanta organisa toy ny HTTP / HTTPS, FTP, NFS, SMB ary ny sisa.
Amin'ireny andalana ireny dia tsy maintsy misy antoka RHCSA antoka alohan'ny hahazoan'ny RHCE ho marihina fa ny mari-pahaizana RHCSA sy ny fianarana RHCSA dia mandrindra ny fananganana anton-kevitra momba ny fahaiza-manao izay manantena ny hiasa ireo zavatra rehetra amin'ny Red Hat. Ho fanamafisana ny fanamarihan'i RHCE dia manolo-kevitra ny vokatra mahatalanjona amin'ny vokatra sy ny fankasitrahana ny indostria. Na dia eo aza ny zava-misy, tokony araraotinao ny fombafomba manazava etsy ambony etsy Red Hat hahazoana mari-pankasitrahana. Tokony handalo fanadinana vitsivitsy ianao mba hanatsarana ny fitadidianao manokana ny tanjona farany amin'ny fanadinana ny mari-pamantarana RHCE.